သငျသညျသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အတူဤစာသားကိုအစားထိုးဖို့ပေးပါ။ သင့်ရဲ့ website မှာ (ဥပမာ, Google Analytics) ကိုအောက်တွင်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုအပိုဆောင်း cookies တွေကို add ပေးပါ
ဒီသီးမူဝါဒကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမှုထွက်သတ်မှတ်သင်တို့သည်ဤ website ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသင်ပေးသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ထားသည်သေချာမှကျူးလွန်သည်။ အကြှနျုပျတို့သညျဤ website တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, ထို့နောက်သင်ကသာဒီ privacy ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့်အညီအသုံးပြုလိမ့်မည်စိတ်ချပါနိုင်ပါတယ်ဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အားဖြင့်အချို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်မေးသင့်ပါ။ ဒီစာမျက်နှာကို update ဖွငျ့အခြိနျမှနျမှဤမူဝါဒကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ သင်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူမင်္ဂလာရှိ၏ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်အချိန်ကနေအချိန်အားဤစာမကျြနှာစစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
ဖောက်သည်စစ်တမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုမှသက်ဆိုင်ရာအခြားသတင်းအချက်အလက်
cookies တွေကိုများ၏ပြည့်ပြည့်စုံစုံစာရင်းငါတို့သည်မြင်ရစုဆောင်း ကျနော်တို့စုဆောင်း cookies တွေကိုများစာရင်း အပိုင်း။
ကျနော်တို့အခါအားလျော်စွာငါတို့သည်သင်တို့သင်ပေးထားသောပြီးသောအီးမေးလ်လိပ်စာသုံးပြီးစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ပါစေခြင်းငှါထင်သောထုတ်ကုန်သစ်များ, အထူးကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်အခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်. မြှင့်တင်ရေးအီးမေးလ်များကိုပေးပို့လိမ့်မည်။
အခြိနျမှနျမှ, ငါတို့သည်လည်းစျေးကွက်သုတေသနရည်ရွယ်ချက်တွေအဘို့အသငျသညျကိုဆက်သွယ်မှသင့်အချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့အီးမေးလ်, ဖုန်း, ဖက်စ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကျိုးစီးပွားအရသိရသည် website ကိုစိတ်ကြိုက်သတင်းအချက်အလက်များသုံးနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက cookie ကိုသင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ကိုအပေါ်ထားရှိခံရဖို့ခွင့်ပြုချက်မေးသောသေးငယ်တဲ့ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျသဘောတူပြီးတာနဲ့ဖိုင်ကိုဆက်ပြောသည်နှင့် cookie ကိုကို web traffic ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကူညီပေးသည်သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆိုက်သွားရောက်တဲ့အခါသင်သိပေးနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွတ်ကီးကို web applications တွေကိုတစ်ဦးချင်းအဖြစ်သင့်အားတုံ့ပြန်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အဆိုပါ web application ကိုသင့်လိုအပ်ချက်ရန်၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုငျသညျ, likes နှင့်သင့်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းနှင့်သတိရနေဖြင့်နှစ်သက်မှုမရှိ။
ကျနော်တို့အသုံးပြုလျက်ရှိသည်သောစာမျက်နှာများကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသွားအလာမှတ်တမ်း cookies တွေကိုကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီကျွန်တော်တို့ကိုဝဘ်စာမျက်နှာအသွားအလာနှင့် ပတ်သက်. ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်တွေကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်။ ကျနော်တို့စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပြီးတော့ data တွေကိုစနစ်ကနေဖယ်ရှားပစ်သည်သာ။
ယေဘုယျအား, cookies များကိုကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအသုံးဝင်သောရှာတွေ့သောစာမျက်နှာများနှင့်သင်တို့ကိုမကျင့်သောစောင့်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ထားခြင်းအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့ဘ်ဆိုဒ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးကူညီပေးပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်တစ်ဦးက cookie ကိုကျွန်တော်တို့ကိုသငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမျှဝေဖို့ရှေးခယျြဒေတာထက်အခြားသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်သင့်အကြောင်းမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်မှဝင်ရောက်ခွင့်, ပေးသည်။ သငျသညျ cookies များကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ကျဆင်းဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ အများစုမှာ web browsers တွေအလိုအလြောကျ cookies တွေကိုကိုလက်ခံသော်လည်း, သင်သည်အများအားဖြင့်သင်သည်လုပ်ချင်ရင် cookies တွေကိုကျဆင်းဖို့ setting သင့် browser မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။ ဒါက website ကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူပြီးထံမှသင်တို့တားဆီးစေနိုင်သည်။
သငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက်အပေါ်တစ်ဦး form မှာဖြည့်ဖို့တောင်းကြသည်အခါတိုင်း, သင်သတင်းအချက်အလက်တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှအသုံးပြုသောခံရဖို့မလိုလားကြပါဘူးကြောင်းညွှန်ပြဖို့ကိုနှိပ်ပါနိုငျသောသေတ္တာကိုရှာ
သင်ယခင်ကတိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖို့သဘောတူခဲ့ကြလျှင်သင်တို့အားရေးသားခြင်းသို့မဟုတ် sales@armati.biz မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်အချိန်တွင်သင့်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်
ငါတို့သည်သင်တို့၏ခွင့်ပြုချက်ရှိသည်သို့မဟုတ်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဥပဒေဖြင့်လိုအပ်သည်မဟုတ်လျှင်ကျွန်တော်တို့တတိယပါတီများမှရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို, ရောင်းချဖြန့်ဖြူးသို့မဟုတ်ငှားရမ်းမည်မဟုတ်။ အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့သညျသငျသညျဤအဖြစ်ပျက်ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလျှင်သင်စိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ပါစေခြင်းငှါထင်သောတတိယပါတီများအကြောင်းကိုမြှင့်တင်ရေးသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသတင်းအချက်အလက်သုံးနိုင်ပါသည်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့သ Data ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအက်ဥပဒေကို 1998 အောက်မှာသင့်အကြောင်းကိုင်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။ သင်အပေါ်ကျင်းပခဲ့သောအချက်အလက်များ၏မိတ္တူလိုပါလျှင်ရေးလိုက်ပါ။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့သညျအပေါ်ကိုင်ထားကြသည်ဆိုသတင်းအချက်အလက်မမှန်ကန်ကြောင်းသို့မဟုတ်မပြည့်စုံကြောင်းယုံကြည်လျှင်, အထက်လိပ်စာမှာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုရေးလိုက်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဟာချက်ချင်းမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်တွေ့မဆိုမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့စုဆောင်း cookies တွေကိုများစာရင်း
အောက်ဖော်ပြပါဇယားကျွန်တော်တို့ကိုစုဆောင်းကို cookies တွေကိုစာရင်းပြုစုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သတင်းအချက်အလက်သူတို့သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
စတိုးဆိုင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည် id သည်တခုရဲ့စာဝှက်ထားတဲ့ဗားရှင်း။
သင်လက်ရှိစတိုးဆိုင်သို့ logged လျှင်တစ်ဦးညွှန်ပြချက်။
ဖောက်သည်အုပ်စုတစ်ခုက encrypt လုပ်ထားတဲ့ဗားရှင်းကိုသင်ပိုင်။
စတိုးဆိုင်များကိုဖုန်းဆက်အပိုင်း ID ကို
သင့်အနေဖြင့်ဆာဗာပေါ်မှာ ID ကို sesssion ။
က cache ကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိမရှိဖော်ပြသည်။
သငျသညျထို site ဟုမေးလျှင်သင့်ရဲ့လှည်းနဲ့ viewing သမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်မှတစ်ဦးက link ကို။
မည်သည့်ရွေးကောက်ပွဲများ၏ ID သငျသညျမကြာသေးမီကအတွက်မဲပေးကြပြီ။
ဖောက်သည်တစ်ဦး cookies တွေကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းရှိမရှိဖော်ပြသည်။